XOG: Farmaajo & Kheyre oo Arrimo Culus kala kulmaya Beelaha Hawiye (Maxaa lagu heystaa?) | Baahin Media
XOG: Farmaajo & Kheyre oo Arrimo Culus kala kulmaya Beelaha Hawiye (Maxaa lagu heystaa?)
Warar hoose ayaa sheegaya in Madaxtooyada Soomaaliya ay ka hortageyso Qorshe ay wataan Xubnaha Mucaaradka oo adeegsanaya Odayaasha iyo Waxgaradka Beelaha Hawiye.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu wajahayo Cadaadis xoogan oo kaga imaanaya Beelaha Abgaal iyo Habar gidir oo ka doonaya inuu cadeeyo mowqifkiisa Maqaamka Magaalada Muqdisho, waxaana arrintan ka dambeeya Siyaasiyiin Mucaarad iyo Masuuliyiin Xilal hore usoo qabtay.
Kulamo ay Magaalada Muqdisho ku yeesheen Siyaasiyiin iyo Odayaal ka socda Beelaha Hawiye ayay ku falanqeeyeen sidii magaalada Muqdisho ay u yeelan laheyd Maqaam maadaama ay hadda cadeyn xuquuqda ay leedahay Magaalada.
Odayaashan ayaa ku heshiiyay in Madaxweynaha Soomaaliya laga doonayo inuu cadeeyo Mowqifkiisa Maqaamka Muqdisho, waxaana lagu wadaa Todobaadkan gudahiisa inay kulan kula qaataan Madaxtooyada Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhowr jeer ka mashquulay inuu la kulmo Odayaashan maadaama uusan heyn qorshe cad uu farta ka saarayo.
Qaar ka mid ah Madaxda Maamul Gobaleedyada ayaa sidoo kale gadaal ka riixaya qorshaha Cadaadiska lagu saarayo Dowlada ee la doonayo in ay cadeyso Mowqifka Maqaamka Muqdisho.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowr jeer la kulmay aar ka mid ah Odayaasha Beelaha Hawiye isagoo u sheegay in Dowlada ay had aka fekereyso nuuca Doorasho ay dalka ka dhaceysa sidaa darteed loo baahan yahay in aan Culeys lagu kordhin Dowlada.